Masai Mara, safari loo socdo | Wararka Safarka
Masai Mara, safari loo socdo
Mariela Carril | | Kenya, Maxaa la arkaa
Masai Mara waa wax weyn safari loo socdo waxayna soo jiitaan socdaalka adduunka oo dhan. Kuwa ku faraxsan raaxada weyn, majiraan waxqabad ka fiican sida loo sameeyo safari iyada oo loo marayo dhulalka Afrika, qorraxda gubanaya ee maalinta iyo cirka quruxda badan ee habeenkii.
Masai Mara waa gudaha kenya waana qayb ka mid ah gobol caan ah, Seeraha Qaranka ee Serengeti. Haddii mid ka mid ah riyadaadu ay tahay inaad ogaato Afrika, markaa maanta waxaan ogaan doonnaa tan gaarka ah keyd dabiici ah.
Sidii aan nidhi, waa Kenya, Narok County, iyo Waxaa loogu magac daray qabiilka Maasai ee degan qaybtan dalka iyo webiga Mara. Asal ahaan, 60-yadii oo ay Kenya wali gumaysanaysay, waxaa loo qoondeeyay inay noqoto meel lagu xanaaneeyo duurjoogta.
Markii dambe ayaa meeshaas lagu ballaadhiyey si loo daboolo aagag kale oo xayawaanku u dhex mari jirey Mara iyo Serengeti. Wadarta fadhiyaa qiyaastii 1.510 kiiloomitir oo laba jibbaaran, inkasta oo markii hore ay ka weyneyd. Waxaa jira saddex goobood oo waaweyn, Sekenani, Musiara iyo Marax-xagalka Mara..
Kaydka waxaa lagu gartaa inuu yahay Dhirta iyo xayawaanka. Flora waxay leedahay acacias iyo fauna, inkasta oo ay kujiraan kaydka oo dhan, waxay aad isugu urursan yihiin meesha biyuhu ka jiraan waana qaybta galbeed ee keydka. Halkaan asal ahaan waa ku nool yihiin xayawaan kasta oo kaararka boosta ah ee Afrika ay tahay inuu lahaado: libaaxyada, shabeellada, maroodiyaasha, gisi iyo wiyisha. Waxa kale oo jira waraabe, hippos iyo haramcad iyo dabcan, duurjoogta. Waxaa jira kumanaan iyaga ka mid ah.
Waxaan ku darnaa cawl, dameero, giraffiro iyo boqolaal nooc oo shimbiro ah. Iyo muxuu dalxiishu ku sameyn karaa keydka? Hagaag, Masai Mara waa mid kamid ah meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago Kenya gaar ahaan iyo guud ahaan Afrika. Booqashooyinka badanaa waxay ku urursan yihiin Maraq-xagalka Mara taas oo ah halka ugu badan ee duurjoogtu ku badan tahay.
Aaggan wuxuu ku yaal 1.600 mitir oo joog sare iyo wuxuu leeyahay xilli-roobaad kaasoo soconaya bilaha Nofeembar ilaa May, iyadoo roobabku ay ugu sarreeyaan inta u dhexeysa Disembar iyo Janaayo iyo inta u dhexeysa Abriil iyo May. Xilliga qalalan waa Juun ilaa Nofeembar. Heerkulka ugu sarreeya waa qiyaastii 30º C iyo ugu yaraan 20 around C.
Ilaa Saddex-xagalka Mara ay soo galaan labo runways had iyo jeer furan, iyadoo aan loo eegayn cimilada. Waa Mara Serena iyo Kichwa Tembo. Wadada marinka ugu weyn laga soo galo ayaa ka gudubta Narok iyo Iridda Sekenani. Aaggan dhexdiisa waxaa ku yaal dalab hoy ah.
Haddii aad lacag heysato, waxaa jira hoy qaali ah, sida Mara Serena oo bixisa 150 sariirood oo raaxo leh ama Xerada Guddoomiyaha Yar, oo leh 36 sariirood oo raaxo leh. Labadan hoy waa kuwa kaliya ee ka jira Marax-xagalka Mara. Dhinaca jiifka waxaa ka mid ah Mpata Club, Olonana, Mara Syria, Kilima Camp iyo Kichwa Tembo.
Waqtiga ugu wanaagsan ee sanadka lagu safro waa inta udhaxeysa bilaha Luulyo iyo Oktoobar, waqtiga hijrada. Bilowga Nofeembar iyo Febraayo sidoo kale waxaa jira muuqaallo dabiici ah oo la yaab leh, laakiin haddii aad tagi karto bilahaas way fiicantahay. Markaa waxaa badanaa jira safarro baabuur habeenkii, booqashooyinka tuulooyinka Maasai si looga barto dhaqanka dadkan, duulimaadyada buufinta, cashooyinka xiddigaha hoostooda ...
Masai ama Maasai waa mid ka mid ah qabaa'ilka astaanta u ah Afrika. Qabiilkan reer guuraaga ah dhaqan ahaan waxay u heellan yihiin xoola dhaqashada waxayna caan ku tahay dharka cas ee soo jireenka ah iyo shukooyinka midabada leh, qurxinta jirkooda. Dhaqanka Afrikaanka iyo xayawaanka Afrikaanka ah, isku darka ugu fiican markaad kafekerayso inaad ku safarto safar.
Markaad ka fikirto safarrada, keydku wuxuu bixiyaa mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu fiican maxaa yeelay sidaan u sheegnay waxay leedahay dhammaan xayawaannada astaamaha ku leh qaaradda. Kuwa waaweyn ee Shan ayaa isu rogaya xilli guuritaan, Julaay ilaa Sebtember, illaa Sagaalka Weyn, laakiin waa hubaal, in safari aad u fiican uu yahay wakhti kasta. Haatan Waxay horeyba u sii qabsanayaan safaaradaha 2021 iyo 2022, laga bilaabo raqiis ilaa raaxo.
Safaradaani waxay noqon karaan dhul ama diyaarad. Safarada wadada waa mid caan ah guud ahaanna bilaw kuna dhamay Nairobi. Sida iska cad, 4 vehicles 4 baabuur ama basaska yar yar. Safarkii inta udhaxeysa Nairobi iyo Masai Mara waxay qaadataa inta udhaxeysa shan ilaa lix saacs, iyadoo kuxiran aagga aad ku sii nagaanayso kaydka. Faa'iidada ay leedahay in la sameeyo safari noocan ah ayaa ah inay ka raqiisan tahay safarka diyaaradda iyo inaad arki karto muuqaalka Kenya qofkii ugu horreeyay oo aad isugu dhow. Faa’iido darrada jirta ayaa ah inaad ku baxdo safar dhulka ah ...
Qiimaha? Qiimaha kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran mudada safarka, laakiin safari ahaan, qaab dhaqaale, wuxuu ka socdaa 400 ilaa 600 dollars; nooc dhexdhexaad ah illaa $ 845 iyo nooc qaali ah oo qiyaastii gaaraya $ 1000.
Safar afar maalmood ah, qiimayaashu waxay ka bilaabmayaan $ 665 oo waxay gaarayaan $ 1200 (nooc dhexdhexaad ah), illaa safarka raaxada ah ee u kici kara ilaa $ 2600. Safari shan maalmood ah wuxuu u dhexeeyaa $ 800 iyo $ 1600 iyo wixii la mid ah, illaa iyo safarka toddobada maalmood ah. Toddobaadka safari wuxuu leeyahay wax ka yar ama ka yar qiimaha la midka ah safarada shanta iyo lixda maalmood ah, marka haddii aad waqti haysato toddobaadka oo dhan waa kuu habboon yahay.
Hada si xushmad leh safaris diyaarad ama Flying Safaris, iyaguna aad ayey ugu habboon yihiin sidoo kale maxaa yeelay diyaarad waxaad kaga mid noqon doontaa Nairobi adiga iyo Masai Mara hal saac gudahood. Waxaa jira duulimaadyo laba jeer maalintii oo haddii aad subaxda hore tagto waxaad imaaneysaa xerada waqtiga qadada. Qiimayaasha? Safari diyaaradeed oo laba maalmood soconaya wuxuu u dhexeeyaa $ 800 iyo $ 950, saddex maalmood oo safari u dhexeeya $ 990 iyo $ 1400 iyo safar afar maalmood ah oo u dhexeeya $ 2365 iyo $ 3460.
Haddii aad doorato hal nooc oo safari ah ama mid kale, gawaarida dhulka lagu isticmaalo waa laba nooc, kuwa la fasaxay: Toyota Landcruiser jeep iyo basaska yaryar. Labaduba waxay leeyihiin saqafyo loo furi karo inay ka fiirsadaan dhulalka Afrika sidoo kale labaduba waxay leeyihiin idaacado iyaga ku ilaaliya inay la xiriiraan ilaaliyeyaasha baarkinka. Soojeedinta hoyga way kala duwan tahayWax walba waxay kuxiranyihiin miisaaniyada, waxaad leedahay xero shan xidigle ah iyo kuwa kale oo ka fudud xitaa guryo kiro ah oo gaar loo leeyahay.
Marka asal ahaan Safari ku yaal Masai Mara Reserve waxaa ka mid noqon kara gawaarida jeep, duulimaadyada buufin, booqashada tuulooyinka Masai, socodka, fardo fuulista iyo cashada jaceylkaku hoos jira xiddigaha ku jira xerooyinka. Waa ogaanshaha iyo aragtida xayawaanka Afrikaanka ah iyo muuqaalka koowaad.
Macluumaadka ugu dambeeya, lacag ayaa la bixiyaa si loogu qoro keydka Waxay ku xirnaan doontaa meesha ay hoyga aad dooratay ku yaal. Haddii aad gudaha ku sii jirto, iridda laga soo galo waa 70 doolar qofkastoo weyn 24 saacadood iyo 430 oo loogu talagalay carruurta da'doodu ka yar tahay 12 sano. Haddii dhanka kale aad joogto banaanka keydka weyn, iridda laga galo waxay ku kacaysaa 80 doollar 24 saacadood iyo canuggiiba 45 doolar.
Sicirkani wuxuu khuseeyaa dhinaca Narok iyo Ilaalinta Mara, ee marinka galbeed ee keydka. Nasiib wanaag kharashyadan waxaa lagu darayaa qiimaha ugu dambeeya ee safarada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Afrika » Kenya » Masai Mara, safari loo socdo
Liencres Dunes Park Dabiiciga ah